Somaliland: Wasiirka Duulista oo WADDANI ku Dhaliilay Inaanay Lahayn Barnaamij Cad oo Siyaasadeed - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Duulista oo WADDANI ku Dhaliilay Inaanay Lahayn Barnaamij Cad oo...
Somaliland: Wasiirka Duulista oo WADDANI ku Dhaliilay Inaanay Lahayn Barnaamij Cad oo Siyaasadeed
Wasiirka wasaaradda Duulista Hawadda iyo Gaadiidka Cirka Jamhuuriyadda Somaliland, Faraxaan Aadan Haybe, ayaa ka jawaabay eedaymo uga yimid masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, kuwaasi oo booqday madaarka diyaaradaha Ceerigaabo oo xidhan, isla markaana aan wax shaqo ah qaban hadda.
Wasiirka wuxuu hab-dhaqanka siyaasadeed ee xisbiyadda mucaaridka ah gaar ahaana xisbiga WADDANI. Waxaanu ku tilmaamay in ay bulshadda u sheegayaan wax yaabo been ah, isla markaana aan ku cadayn buugaagta barnaamijyadoodda siyaasadda, kuwaasi oo ka hadlaya waxyaabo aanay qorsheba ka lahayn.
Wasiirka duulista hawadda waxa uu sidan ka sheegay mar uu maanta hadal ka jeediyay munaasibad lagu sagootinayay shaqaale ka tirsan wasaaradda duulista oo tababar aqoon korodhsi ah ugu baxay dalka Itoobiya.
“Waxaan warbaahinta ka maqlay xubno xisbiga WADDANI ka tirsan oo booqday madaarka diyaaradaha ee magaaladda Ceerigaabo, oo ka hadlayay madaarka iyo hawlihiisa. Xisbiyadda mucaaridka ahi marka ay barmaamij samaystaan, ayay raaci jireen dabadeed wixii barmaamijkooda ugu jira uun bay ka hadli jireen. Laakiin waxaad moodaa imika in ay qaar ku Dayoobeen (Dham’een) oo ay ka hadlayaan waxaan barmaamijkoodaba ku jirin,”ayuu yidhi Farxaan Aadan Haybe, waxaannu intaas ku daray; “Waxaan rejaynayaa in mudada noo hadhay haddii ay suurto gasho in wixii daruuri ah laga qabto. Taasi waxay muujinaysaa in aanay dayacaadi jirin, ku tallo-galka qorshaha wasaaradana ay ku jirto.
Laakiin waxaan leeyahay qolyaha mucaaridka ah haddii aad dacaayad ka dhiganaysaan, waxa la idiinka baahan yahay waxaad qabanaysaan ee aad barmaamij siyaasadeedka ka dhigateen ka hadla, kolba inta aad gidaar istaagtaan ha odhanina kan iyo kan, ciidamada ayaanu mushahar u kordhinaynaa, wax aad qaadi karaysaan oo dadku idinka aqbalo ka hadla.”
Waxa kaloo uu ka warbixiyay halka ay marayso hawllo dib u dhis ah oo lagu samaynayo madaaradda diyaaradaha ee magaalooyinka Burco, Ceerigaabo iyo Boorama. Waxaannu yidhi “Ka wasaarad ahaan waxaan idiin sheegayaa in madaarka Burco, ka Ceerigaabo iyo ka Boorama. Madaarka Burco hadda shaqadiisu way socotaa, ka Ceerigaabo iyo Boorame in laga shaqeeyo wixii awoodu noo saamaxday ayaanu ku dedaalaynaa. Ka Laasacaanood laftiisu hadda wuu shaqeeyaa.
Waxyaabaha saameeyay waxa ka mid ah duruufta dhaqaale, abaaraha, sixir bararka waxyaabahaas ayaa miisaaniyadeenii saameeyay boqolkiiba 40% ayaa miisaaniyadeenii sanadka is-dhimay. Taasi waxay keentay in madaxwaynuhu soo saaray go’aan ah in la hakiyo waxyaabihii mashaariicda ahaa oo dhan, waana sababta hakisay shaqadii mdaaradda laga waday”.
Dhinaca kale wasiirka duulista ayaa shalay sii sagootiyey 10 ka mid ah shaqaalaha wasaaradiisa oo waxbarasho ugu baxay dalka Itoobiya, kuwaasi oo hore u soo bartay cilmiga hagista diyaaraha, isla markaana hadda markii labaad la sii xoojin doono xirfadooda
Munaasibada sagootinka shaqaalahaasi waxbarashadda ugu baxay Itoobiya oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Hargaysa ayaa wasiirka oo hadal ka jeediyay ayaa kula dar-daarmay shaqaalahan aqoon korodhsiga ku tegaya Itoobiya in ay si wanaagsan uga soo faa’iidaystaan.
“Waxaan idinka rejaynayaa in aad si fiican uga soo faa’iidaysataan tababarkaasi, waana mid qiimo weyn inoo leh. Sidoo kale waxa jira shaqaale kale oo ay hay’adda ICAO inoo soo tababarayso oo Nairobi ku maqan. Ujeedadeenu waxay tahay in aynaan ICAO iyo cid kale toona isku halayn ee maalinta ay noqoto in aynu hawdeena maamulano in aad idinku noqotaan kuwa shaqadaa buuxinaya,” ayuu yidhi wasiir Farxaan.
Ugu danbayn wasiirka ayaa u mahad celiyay dawladda Itoobiya oo uu sheegay in ay mar walba gacan ka siiso kobcinta aqoonta shaqaalaha iyo tababaradaba. Waxaanu yidhi “Waxaan mahad balaadhan u soo jeedinayaa dawlada Ethiopia oo si hagar la’aan ah noola garab taagan dedaal kastoo aynu ka dal-bano noogana soo jawaaba, masuuliyiinteeda oo ugu horeeyo raysal wasaaraha iyo wasiirka gaadiidka.”
Somaliland: Wasiirka Gadiidka Oo Shaaciyey Saddex Arin Oo Sabab U Ah Shilalka Gadiid Ee Batay
Somaliland: Wasiir Cadami Oo Ka Hadlay Dareenada Beesha Caalamka Ee Dib U Dhaca Doorashada Iyo Sahanka Shidaalka
Somaliland: “Ninkii Aniga Maalliyada Iga Tirsaday Saddex Jeer Ayuu Lacag Soo Daabacday, Sababtuna Waxay Ahayd Inuu Yidhaahdo Dakhligaan Soo Saaray Wuu Ka Badan Yahay Kii Ina Xaashi”